Tobit – 2माछा
घर / बाइबल / पुरानो नियमका / Tobit
1:1 Tobit Naphtali कुलको र शहर थियो (जो आशेर माथि गालील माथिल्लो भागमा छ, बाटो पछि, जो पश्चिम तिर जान्छ, कि यसको बाँया Sephet को शहर मा छ).
1:2 उहाँले Shalmaneser को दिन कैद लिइएको थियो हुनत, अश्शूरीहरूले राजा, पनि कैद रूपमा यस्तो अवस्थामा, उहाँले सत्यको मार्ग मरुभूमि थिएन.
1:3 त्यसैले त, हरेक दिन, उहाँले प्राप्त गर्न सक्षम थियो सबै कि, उहाँले आफ्ना सँगी कैद भाइहरूलाई मा bestowed, जो आफ्नो kindred थिए.
1:4 र, उहाँले Naphtali कुलको कुनै पनि कान्छो बीच हुँदा, उहाँले त आफ्नो काम कुनै पनि बालक जस्तो व्यवहार धेरै देखाए.
1:5 अनि तेस्पछि, सबै सुनको calves गर्न जाँदा जो यारोबामले, इस्राएलका राजा, बनाएको, उहाँले एक्लै तिनीहरूलाई सबै कम्पनी बाट भागे.
1:6 अहिलेसम्म उहाँले यरूशलेम मा जारी, प्रभुको मन्दिरमा, र त्यहाँ उहाँले इस्राएलका परमेश्वरले लाग्यो, वफादार भई सबै आफ्नो पहिलो-फल र आफ्नो दशांश भेटी.
1:7 त्यसैले त, तेस्रो वर्षमा, उहाँले नयाँ रूपान्तरण गर्न र नयाँ आगमन गर्न आफ्ना सबै दशांश प्रबन्ध.
1:8 यस्तो यी र यस्तै कुराहरूको, पनि एक केटा रूपमा, उहाँले परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार अवलोकन.
1:9 साँच्चै, उहाँले एक मानिस बन्न थियो जब, उसले आफ्नो कुलको पत्नी अन्ना रूपमा प्राप्त, र उनको एक छोरा गर्भवती, जसलाई उहाँले आफ्नै नाम तोकिएको.
1:10 आफ्नो सानैदेखि, उहाँले परमेश्वरको डर र सबै पाप छुँदै नछुने उसलाई सिकाउनुभएको.
1:11 त्यसैले, जब, को कैद समयमा, उहाँले निनवेको शहर मा आफ्नो पत्नी र छोरा संग आइपुगेका थिए, आफ्ना सबै कुलको संग,
1:12 (तापनि तिनीहरू सबै अन्यजातिहरूको को खाद्य पदार्थ देखि खाए,) उहाँले आफ्नो खाद्य पदार्थ संग दूषित थियो आफ्नो प्राण गार्ड सहित र कहिल्यै.
1:13 र उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको mindful थियो, परमेश्वरले उहाँलाई Shalmaneser राजाको दृष्टि मा अनुग्रह दिनुभयो.
1:14 र उहाँले चाहनुहुन्छ जहाँ जान उसलाई शक्ति दिनुभयो, उहाँले कामना जो गर्न स्वतन्त्रता भएको.
1:15 त्यसैले, उहाँले सबै कैद थिए जो गर्न मा जारी, र उहाँले तिनीहरूलाई सहयोगी सल्लाह दिए.
1:16 तर उहाँले rages आइपुगेको थियो जब, को Medes को शहर, उहाँले चाँदीको दस प्रतिभा थियो, कि जो देखि उहाँले सम्मान मा राजा द्वारा दिइएको थियो.
1:17 र जब, आफ्नो kindred को ठूलो खैलाबैला मच्चाउँछन् बीचमा, उहाँले Gabael को destitution देखे, जो आफ्नो कुलको थियो, उहाँले उसलाई loaned, एक लिखित सम्झौता अन्तर्गत, चाँदी को माथि उल्लिखित वजन.
1:18 सत्य मा, लामो समय पछि, राजा मृत्यु Shalmaneser, सनहेरीबले गर्दा आफ्नो छोरा आफ्नो ठाउँमा शासन, र उहाँले इस्राएलका छोराहरू घृणा आयोजित.
1:19 हरेक दिन, Tobit सबै हुनत आफ्नै मान्छे यात्रा, र उहाँले तिनीहरूलाई सान्त्वना, र उहाँले प्रत्येक एक धेरै उहाँले सकेजति रूपमा आफ्नो स्रोतहरू देखि वितरण.
1:20 उहाँले भोकाहरूलाई nourished, र त्यो नाङ्गो गर्न लुगा आपूर्ति, र त्यो मरेको को दफन लागि र slain को चासो देखाए.
1:21 अनि तेस्पछि, राजा सनहेरीबले यहूदियाबाट फर्के थियो जब, परमेश्वरको किनभने आफ्नो निन्दा को वरपरका सबै कारण थियो जो महामारीले भागिरहेका, र, क्रोधित भएर, उहाँले इस्राएलका छोराहरू थुप्रै मार्ने थियो, Tobit आफ्नो शरीर गाडे.
1:22 र जब यो राजालाई रिपोर्ट थियो, उहाँले slain गर्न उहाँलाई आदेश, र उहाँले आफ्ना सबै सम्पत्तिहरूमाथि टाढा लिए.
1:23 सत्य मा, Tobit, आफ्नो छोरा र उनको पत्नी तर केही संग भागिरहेका, किनभने धेरै उहाँलाई प्रेम लुकेका रहन सक्षम थियो.
1:24 सत्य मा, चालीस पाँच दिन पछि, राजा आफ्नै छोरा द्वारा slain थियो,
1:25 र Tobit आफ्नो घर फर्कन सक्षम थियो, र आफ्ना सबै स्रोतहरू उहाँलाई पुनःस्थापित थिए.
2:1 सत्य मा, यो पछी, त्यहाँ प्रभुको भोज दिन थियो जब, र एक राम्रो खाने Tobit घरमा तयार गरिएको थियो,
2:2 उहाँले आफ्नो छोरा भने: "जानुहोस्, र हाम्रो साथ भोजमा हाम्रो कुलको देखि परमेश्वरको डर केही अरूलाई ल्याउन। "
2:3 र उहाँले गएका थिए पछि, फिर्ता, उहाँले तिनलाई इस्राएलका छोराहरू एक रिपोर्ट, आफ्नो घाँटी कटौती संग, सडक मा झूट थियो. अनि तुरुन्तै, उहाँले तालिका मा reclining आफ्नो ठाउँबाट leapt, आफ्नो खाने छोडेर, र शरीर गर्न व्रत संग गयो.
2:4 र यसलाई लिएर, उहाँले आफ्नो घर मा गोप्य यसलाई लगे, ताकि, पछि सूर्य सेट थियो, उहाँले cautiously उहाँलाई मुर्दा गाड्नु सक्छ.
2:5 र उहाँले शरीर लुकेको थियो पछि, उहाँले शोक र भय आफ्नो रोटी chewed,
2:6 शब्द उहाँ सम्झनुहुन्छ प्रभु अगमवक्ता आमोस मार्फत बोलेका: "तपाईंको भोज दिन विलाप र शोक मा गरिएका गरिनेछ।"
2:7 साँच्चै, सूर्य सेट थियो जब, उहाँले बाहिर गए, र उहाँले तिनलाई गाडे.
2:8 उहाँका सबै छिमेकी उसलाई तर्क, यसो: "अब, आदेश किनभने यस विषयमा तपाईं कार्यान्वयन गर्न दिइएको थियो, र तपाईं बल्लतल्ल एक मृत्यु वाक्य बच, र फेरि मरेका burying छन्?"
2:9 तर Tobit, थप राजा भन्दा परमेश्वरको भय राख्ने, को slain को शरीर टाढा चोरेछ र आफ्नो घर मा उनलाई लुकाइन्, र रात को बीचमा, उहाँले तिनीहरूलाई गाडे.
2:10 तर यो एक दिन भयो, मरेका burying देखि थकित भएर, उहाँले आफ्नो घरमा आए, र उहाँले तल पर्खाल अर्को फाले, र उहाँले सुत्थ्यौं.
2:11 र, उहाँले सुतिरहेको थियो, एक Swallow गरेको गुँड बाट न्यानो गोबर आफ्नो आँखा मा गिर, र उहाँले अन्धो थियो.
2:12 र त प्रभु अधीन यो परीक्षण अनुमति, क्रममा एउटा उदाहरण धैर्य को posterity दिइएको हुन सक्छ कि, जो पनि पवित्र अय्यूबको जस्तो छ.
2:13 लागि, उहाँको सानैदेखि, उहाँले सधैं परमेश्वरको मानिसहरू डराउँदैनन् र उहाँको आज्ञा पालन गरेको थियो, त्यसैले उहाँले किनभने उहाँलाई befallen थियो अन्धो को महामारीले परमेश्वरको अघि निरुत्साहित थिएन.
2:14 तर उहाँले परमेश्वरको डरले immoveable बाँकी, परमेश्वरको धन्यवाद दिने सबै आफ्नो जीवन को दिन.
2:15 लागि राजा mocked छन् जस्तै अनमोल अय्यूब, त्यसैले पनि आफ्नो नातेदार र परिचितहरू आफ्नो जीवन हाँसो, यसो:
2:16 "कहाँ आफ्नो आशा छ, तर्फबाट तपाईंलाई जो alms दिनुभयो र मृत गाडे?"
2:17 सत्य मा, Tobit तिनीहरूलाई सच्याउनुभयो, यसो: यसरी "नबोल्नुहोस्,
2:18 हामी पवित्र जनहरूको छोराहरू हुन्छन्, र हामी परमेश्वरको गर्ने उहाँको अघि आफ्नो विश्वासमा कहिल्यै परिवर्तन गर्नेहरूलाई दिनेछु जो कि जीवन गर्न तत्पर। "
2:19 सत्य मा, पत्नी अन्ना दैनिक बुनाई काम गर्न बाहिर गए, र त्यो फिर्ता त्यो उनको हात को श्रम द्वारा प्राप्त गर्न सक्षम थियो कि प्रावधान ल्याए.
2:20 यो कि भयो whereupon, एक जवान बाख्रा प्राप्त भएको, त्यो घर यो ल्याए.
2:21 जब उनको पति आफ्नो bleating को आवाज सुने, उहाँले भन्नुभयो, "हेर,, यसलाई चोरी छैन हुन सक्छ भनेर, यसको मालिक यसलाई फिर्ता, हामीलाई त खान को लागि यो न्यायसंगत छ लागि, वा स्पर्श गर्न, केहि चोरी। "
2:22 यो मा, उसको श्रीमती, क्रोधित भएर, उत्तर दिए, "स्पष्ट छ, आफ्नो आशा व्यर्थ भएको छ, र आफ्नो almsgiving को तरिका स्पष्ट भएको छ। "
2:23 र यी र अन्य यस्तै यस्तो शब्द संग, तिनले उसलाई निन्दा.
3:1 त्यसपछि Tobit sighed, र उहाँले आँसु प्रार्थना गर्न थाले,
3:2 यसो, "हे प्रभु, तपाईं मात्र हो र आफ्नो सबै इन्साफ मात्र हो, र आफ्नो सबै मार्गमा कृपा हो, र सत्य, र न्याय.
3:3 र अब, हे प्रभु, मलाई सम्झना, र मेरो पापको लागि बदला लिने छैन, र मेरो अपराध आपत्ति कल छैन, न त मेरो आमाबाबुको ती.
3:4 हामी आफ्नो आदेशहरू पालन छैन, र त हामी plundering र कैद गर्न भन्दा हस्तान्तरण गरिएको छ, र मृत्यु, र खिसी गर्न, र सबै जातिका अघि निरादर रूपमा, जो बीच तपाईं हामीलाई dispersed छ.
3:5 र अब, हे प्रभु, ठूलो आफ्नो इन्साफ. हामी आफ्नो आदेशहरू अनुसार काम छैन, र हामी तपाईंलाई अघि भवदीय हिंडे छैन.
3:6 र अब, हे प्रभु, आफ्नो इच्छा अनुसार मलाई के, र शान्ति प्राप्त गर्न मेरो आत्मा आदेश. मलाई मर्न लागि यो थप expedient छ लागि, बाँच्न भन्दा। "
3:7 अनि त, एउटै दिनमा, यो कि भयो सारा, Raguel छोरी, rages मा, को Medes को शहर, पनि उनको बुबाको सेवक नौकरानियां को एक एक निन्दाले सुने.
3:8 त्यो सात पति गर्न दिइएको थियो लागि, र Asmodeus नामको राक्षस तिनीहरूलाई मारे थियो, बित्तिकै तिनीहरू उनको नजिक थियो रूपमा.
3:9 त्यसैले, त्यो उनको दोष लागि दासी सही गर्दा, त्यो उनको जवाफ, यसो, "हामी कहिल्यै पृथ्वीमा तपाईं छोरा वा छोरी हेर्न सक्छु, तपाईं आफ्नो पति को murderess.
3:10 तपाईं पनि मलाई मार्ने थिए, तपाईंले पहिले नै सात पति हत्या गरेका छन् जस्तै?"यी वचनहरू, त्यो उनको घर को माथिल्लो कोठामा दीं. र तीन दिन र तीन रातका लागि, त्यो खान वा पिउन गर्नुभयो.
3:11 तर, आँसु प्रार्थनामा जारी, त्यो परमेश्वरको beseeched, उहाँले यस निन्दाले देखि उनको मुक्त गर्नु हुनेछ भनेर.
3:12 र यो तेस्रो दिन मा भयो, त्यो उनको प्रार्थना पूरा बेला, प्रभु आशिष्,
3:13 त्यो भने: "धन्य तपाईंको नाम हो, हाम्रो पुर्खाहरूले को हे परमेश्वर, जो, तपाईं क्रोधित भएको थियो हुनत, कृपा देखाउने. र कष्ट को समय मा, के तपाईं पुकारा गर्नेहरूको पापको खारेज.
3:14 तिमीलाई, हे प्रभु, म मेरो अनुहार बारी; तिमीलाई, म मेरो आँखा निर्देशन.
3:15 म तपाईंसँग प्रार्थना गर्छु, हे प्रभु, तपाईं यस निन्दाले को चेन मलाई मुक्त गर्न सक्छ भन्ने, वा कम से कम मलाई पृथ्वीको टाढा लिन.
3:16 तिमीलाई थाहा छ, हे प्रभु, कि म एक पति कहिल्यै coveted छ, र म सबै अशुद्ध इच्छा देखि सफा मेरो प्राण संरक्षित छन्.
3:17 म जो प्ले ती संग आफैलाई mingled कहिल्यै. र म levity हिंड्न गर्नेहरूलाई एक सहभागीले रूपमा आफैलाई प्रस्तुत छैन.
3:18 तर म एक पति स्वीकार गर्न consented, डर मा, मेरो कामवासना मा.
3:19 र, या त म तिनीहरूलाई को अयोग्य थियो, वा तिनीहरूले सायद मलाई योग्य थिए. सायद लागि अर्को पति मलाई संरक्षित छन्.
3:20 तपाईंको सल्लाह को लागि मानिस को क्षमता भित्र छैन.
3:21 तर जसले तपाईंलाई उपासना सबै यो केही हो: एक जीवन, यदि यो परीक्षण गर्नुपर्छ, ताज पहनाया गरिनेछ, र यदि यो कष्ट हुनुपर्छ, बुझाइएको गरिनेछ, र यदि यो सही हुनुपर्छ, तपाईंको कृपा भेट्नुपर्छ अनुमति गरिनेछ.
3:22 तपाईं हाम्रो perdition संग प्रसन्न छैन लागि. लागि, एक आँधी पछि, तपाईं सौहार्द बनाउन, र आँसु र रूँदै पछि, तपाईं exultation पोखाउनुहोस्.
3:23 आफ्नो नाम May, इस्राएलका हे परमेश्वर, सधैंभरि आशिष् हुन। "
3:24 त्यो समयमा, तिनीहरूलाई दुवै प्रार्थना सबैभन्दा उच्च परमेश्वरको महिमा को दृष्टि मा सुने थिए.
3:25 र प्रभुको पवित्र स्वर्गदूत, रफएल, ती दुवै हेरचाह गर्न पठाएको थियो, जसको प्रार्थना प्रभुको दृष्टि मा एकै समयमा recited थिए.
4:1 त्यसैले, Tobit तिनको प्रार्थना सुन्नुभयो थियो छलफल गर्दा, उहाँले मर्न सक्षम हुन सक्छ भनेर, उहाँले उसलाई आफ्नो छोरा टोबीस भनिन्छ.
4:2 अनि उहाँले उसलाई भन्नुभयो: "मेरो छोरा, मेरो मुखबाट शब्दहरू सुन्न, र तिनीहरूलाई सेट, एक जग जस्तै, आफ्नो हृदयमा.
4:3 जब परमेश्वरले मेरो प्राण प्राप्त हुनेछ, मेरो शरीर मुर्दा गाड्नु. र तपाईं आफ्नो आमा आदर गर्नेछु, उनको जीवन को सबै दिन.
4:4 तपाईं त्यो उनको गर्भमा किनभने तपाईं को भोगे के ठूलो perils को mindful हुन बाध्य छन् लागि.
4:5 तर त्यो पनि उनको जीवन को समय पूरा हुनेछ जब, मेरो नजिकै उनको मुर्दा गाड्नु.
4:6 यद्यपि, आफ्नो जीवन को सबै दिनको लागि, आफ्नो मन परमेश्वरको छ. र तपाईं पाप गर्न सहमत कहिल्यै सावधान, न त हाम्रो प्रभु परमेश्वर को आदेशहरू बेवास्ता.
4:7 तपाईंको पदार्थ देखि alms दिन, र कुनै पनि pauper आफ्नो अनुहार त्यागेर छैन. त्यसैले यसलाई न प्रभु को अनुहार तपाईं टाढा गरिएका गरिने हुनेछ.
4:8 जो तरिकामा तपाईं सक्षम छन् कि, त्यसैले तपाईं दयालु हुनेछ.
4:9 तपाईं धेरै छ भने, प्रशस्त मात्रामा वितरण. तपाईं सानो छ भने, तैपनि खुला एक सानो मान दिनु गर्ने प्रयास.
4:10 तपाईं आवश्यकता को दिन को लागि माथि आफैलाई लागि राम्रो इनाम भण्डारण लागि.
4:11 almsgiving लागि प्रत्येक पापबाट र मृत्युबाट मुक्ति, र यो अन्धकार मा जान प्राण ग्रस्त छैन.
4:12 Almsgiving सबैभन्दा उच्च परमेश्वरको सामु विश्वासको ठूलो कार्य हुनेछ, यो अभ्यास गर्ने सबै ती लागि.
4:13 आफैलाई राख्न हेरचाह, मेरो छोरा, सबै व्यभिचार देखि, र, आफ्नो पत्नी बाहेक, कहिल्यै त्यस्तो ठेस थाहा आफैलाई अनुमति.
4:14 आफ्नो मन वा आफ्नो शब्दमा शासन गर्न अहङ्कारको कहिल्यै अनुमति. यसलाई मा लागि, सबै perdition यसको सुरुवात थियो.
4:15 र जसले तपाईं को लागि काम को कुनै पनि प्रकारको गरेको छ, तुरुन्तै उसलाई आफ्नो ज्याला तिर्न, र आफ्नो ज्यालादारी कामदारको को ज्याला सबै तपाईंसँग रहन दिनु छैन.
4:16 तपाईं अर्को तपाईंलाई गरेका गर्न घृणा थियो जो, तपाईं कहिल्यै अर्को त्यसो भनेर हेर्न.
4:17 भोकाहरूलाई र खाँचोमा परेका आफ्नो रोटी खान, र आफ्नो लुगा संग नग्न कवर.
4:18 बाहिर एउटा बस मानिसको दफन आफ्नो रोटी र आफ्नो रक्सी सेट, र खान छैन र पापी यसलाई देखि पिउन.
4:19 सधैं एक बुद्धिमानी मानिसको सल्लाह खोज्न.
4:20 सबै समय मा परमेश्वरले आशीर्वाद. र उहाँले आफ्नो तरिका निर्देशन भनी आवेदन र सबै आफ्नो योजना उहाँलाई रहन सक्छ.
4:21 र अब, म तपाईंलाई प्रकट, मेरो छोरा, म चाँदीको दस प्रतिभा lent कि, तपाईं अझै पनि एक जवान बच्चाहरु थिए गर्दा, Gabael गर्न, rages मा, को Medes को शहर, र म मेरो साथ आफ्नो लिखित सम्झौता.
4:22 अनि त, तपाईं उहाँलाई यात्रा हुन सक्छ कसरी सोध्नु र उहाँबाट चाँदी को माथि उल्लिखित वजन प्राप्त, र लिखित सम्झौता उहाँलाई फिर्ता.
4:23 नडराऊ, मेरो छोरा. हामी साँच्चै गरिब जीवन नेतृत्व गर्छन्, तर हामी धेरै राम्रो कुरा हुनेछ: हामी परमेश्वरको डर भने, र सबै पाप बाट झिक्न, र राम्रो छ के। "
5:1 त्यसपछि टोबीस आफ्नो बुबालाई प्रतिक्रिया, र, उहाँले भन्नुभयो: "म तिमी मलाई निर्देशन गरेझैं सबै गर्नेछ, बुबा.
5:2 तर म यो पैसा कसरी प्राप्त गर्न थाहा छैन. उहाँले मलाई थाह छ, र म उसलाई चिन्दिन. म उसलाई के प्रमाण दिन पर्छ? र म बाटो कुनै पनि भाग थाहा छैन, जो कि ठाउँमा जान्छ। "
5:3 त्यसपछि उनको पिता जवाफ दिए, र, उहाँले भन्नुभयो: "वास्तवमा, म मेरो अधीनमा रहेका बारेमा लिखित सम्झौता, जो, जब तपाईं उसलाई यो देखाउन, उहाँले तुरुन्तै चुक्ता हुनेछ.
5:4 तर अब बाहिर जाने, र पछि केही विश्वासी मानिस सोध्नु, जो आफ्नो ज्याला लागि बदलामा के तपाईं सुरक्षित राख्न तपाईं संग जाने, म अझै पनि जीवित छु गर्दा यसलाई प्राप्त गर्न सक्छ भनेर। "
5:5 त्यसपछि टोबीस, प्रस्थान, एक भव्य जवान फेला, खडा girded र यात्रा को लागि जस्तो देखिने तयार.
5:6 र उहाँले परमेश्वरको दूत थियो भनेर थाह पाउँदा छैन, उहाँले उसलाई अभिवादन, र, उहाँले भन्नुभयो, "तिमी कहाँको हौं, राम्रो जवान?"
5:7 र त त्यो जवाफ, "इस्राएलका छोराहरू बाट।" अनि टोबीस उहाँलाई भने, "तपाईं Medes को क्षेत्रमा जान्छ भन्ने तरिका थाह?"
5:8 र उहाँले जवाफ दिनुभयो: "म थाहा छ. र म प्रायः आफ्नो सबै बाटाहरू मार्फत हिंडे छ, र म Gabael संग बसे, हाम्रो भाइ, जो rages बसोबास, को Medes को शहर, जो Ecbatana को माउन्ट मा स्थित छ। "
5:9 टोबीस उहाँलाई भने, "म तपाईंलाई बिन्ती, मेरो लागि यहाँ प्रतीक्षा, जब सम्म म बुबा यी नै कुराहरू भन। "
5:10 त्यसपछि टोबीस, प्रवेश, आफ्नो बुबालाई यी सबै कुराहरू प्रकट. जो मा, आफ्नो बुबा, प्रशंसा मा, उहाँले तिनलाई प्रविष्ट भनेर सोधे.
5:11 अनि त, प्रवेश, उहाँले उसलाई अभिवादन, र, उहाँले भन्नुभयो, "तपाईं सधैं सकिन्छ gladness।"
5:12 र Tobit भने, "मेरो लागि gladness कस्तो हुनेछ, पछि म अन्धकारमा बस्न र स्वर्गको ज्योति देख्नुभएन?"
5:13 र जवान उहाँलाई भने, "प्राण मा स्थिर हुनुहोस्. परमेश्वरले आफ्नो उपचार नजिकै छ। "
5:14 र यति Tobit उहाँलाई भने, "तपाईं rages मा Gabael मेरो छोरा नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, को Medes को शहर? जब तपाईं फर्केर, म तपाईं आफ्नो ज्याला भुक्तानी गर्नेछ। "
5:15 र दूतलाई उहाँलाई भने, "म उसलाई नेतृत्व गर्नेछन्, र म तपाईंलाई फिर्ता उहाँलाई ल्याउनेछ। "
5:16 र Tobit उहाँलाई प्रतिक्रिया, "म तिमी मलाई बताउन अनुरोध: जो परिवार वा जो जनजाति बाट तपाईं?"
5:17 र राफेइल दूतलाई भने, "तपाईं किराया एक को परिवार खोजी नगर्नुहोस्, वा अरू पनि भाडामा आफूलाई हात, आफ्नो छोरा संग जान?
5:18 तर, सायद नत्र म चिन्ता गर्न कारण: म अजर्याहको छु, Hananiah ठूलो छोरा। "
5:19 र Tobit प्रतिक्रिया, "तपाईं एउटा ठूलो परिवार छन्. तर म सोध्न, क्रोधित हुन छैन म आफ्नो परिवार जान्न चाहन्थे कि। "
5:20 तर परी उहाँलाई भने, "म सुरक्षित तपाईंको छोरा नेतृत्व गर्नेछन्, र म उसलाई फिर्ता गर्न सुरक्षित गर्नेछ। "
5:21 र यति Tobit, उत्तर, भने, "May तपाईं राम्रो हिंड्न, र परमेश्वरले तपाईंको यात्रा सँग हुन सक्छ, र आफ्ना दूत तपाईं साथ दिनु हुन सक्छ। "
5:22 त्यसपछि, सबै कुरा तयार थिए जब जो आफ्नो यात्रामा नपर थिए, टोबीस आफ्नो बुबालाई विदाई भन्नुभयो, र आफ्नो आमा, र तिनीहरूलाई दुई सँगै हिंडे.
5:23 र तिनीहरूले बाहिर सेट थियो जब, आफ्नो आमा रुन्छ थाले, र भन्न: "हाम्रो पुरानो उमेर को कर्मचारी लिएका छन्, र तपाईं हामीलाई टाढा उहाँलाई पठाएको.
5:24 म पैसा भनेर इच्छा, जसको लागि तपाईं उसलाई पठाएको, कहिल्यै भएको थियो.
5:25 हाम्रो गरिबी लागि हाम्रो लागि पर्याप्त छ, ताकि हामी यसलाई हामी हाम्रो छोरा देखे कि धन रूपमा गणना हुन सक्छ। "
5:26 र Tobit उसलाई भन्नुभयो: "रुन्छ नगर्नुहोस्. हाम्रो छोरा सुरक्षित पुग्नु हुनेछ, र उहाँले हामीलाई सुरक्षित फर्कन हुनेछ, र आफ्नो आँखा उहाँलाई देख्नेछन्.
5:27 म परमेश्वरको असल स्वर्गदूत तिनलाई सँगसँगै भनेर विश्वास र उहाँले राम्रो तरिकाले सबै कुराहरू जो उहाँको वरिपरि उत्पन्न आदेश भनेर लागि, यस्तो उहाँले gladness हामीलाई फर्के भन्ने। हुनेछ "
5:28 यी शब्दहरू मा, आफ्नो आमा रूँदै भएनन्, र त्यो मौन थियो.
6:1 र यति टोबीस मा जारी, र कुकुर उसलाई निम्न थियो, र उहाँले पहिलो रोक्न बिन्दुमा बसे, नदी दजला नजिकै.
6:2 र उहाँले आफ्नो खुट्टा धुन बाहिर गए, र हेर, एक विशाल माछा उहाँलाई निल्न बाहिर आए.
6:3 र टोबीस, यो डराउने भइरहेको, एक जोर आवाज कराए, यसो, "सर, यो मलाई आक्रमण!"
6:4 र दूतलाई उहाँलाई भने, "को नाले गरेर रहनुहोस्, र तपाईं यसलाई आकर्षित। "अनि उहाँले त्यसो गर्नुभएको थियो जब, उहाँले सुक्खा भूमि मा यो झिकेर, र यो आफ्नो खुट्टा अघि थ्रैश गर्न थाले.
6:5 त्यसपछि स्वर्गदूत तिनलाई भन्नुभयो: "यो माछा अंतडी निकालन, र आफ्नो हृदय पन्छाएर, र आफ्नो पित्त, र आफैलाई लागि आफ्नो कलेजो. यी कुराहरू लागि उपयोगी औषधि रूपमा आवश्यक छन्। "
6:6 र उसले सकिएपछि थियो, उहाँले आफ्नो शरीर भुना, र तिनीहरूले बाटोमा तिनीहरूलाई यसलाई लिएर. तिनीहरूले नुनीन बाँकी, यो तिनीहरूको लागि पर्याप्त हुन सक्छ भनेर, तिनीहरूले rages मा आइपुग्दा थियो सम्म, को Medes को शहर.
6:7 त्यसपछि टोबीस दूतलाई प्रश्न, र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, "म तपाईंलाई बिन्ती, भाइ अजर्याहको, मलाई बताउन यी कुराहरू के उपचार पकड, जो तपाईंले मलाई माछा देखि राख्ने भन्नुभयो छन्?"
6:8 र दूतलाई, उत्तर, उहाँलाई भने: "तपाईं जल coals यसको हृदय सानो टुक्रा यदि, यसको धुवाँ दुष्ट सबै प्रकारको ड्राइव गर्नेछन् टाढा, एक मानिस देखि वा एक महिला बाट कि, त्यसैले तिनीहरू अब तिनीहरूलाई भेट्नुपर्छ भनेर.
6:9 र पित्त आँखा anointing लागि उपयोगी छ, जो त्यहाँ सेतो स्पेक हुन सक्छ, र तिनीहरूले निको हुनेछ। "
6:10 र टोबीस उहाँलाई भने, "कहाँ तपाईं हामी रहन कि रुचि गर्छन्?"
6:11 र दूतलाई, प्रतिक्रिया, भने: "यहाँ एक Raguel नाम छ, राम्ररी आफ्नो कुलको तपाईंले सम्बन्धित मानिस, र उहाँले सारा नामको छोरी छ, तर उहाँले कुनै अन्य पुरुष वा महिला छ, उनको बाहेक.
6:12 आफ्ना सबै धनसम्पत्ति तिमीहरूमा निर्भर छ, र तपाईं विवाह आफूलाई उनको लिन पर्छ.
6:13 त्यसैले, उनको पिता देखि उनको लागि अनुरोध, र उहाँले पत्नी रूपमा उनको दिनेछु। "
6:14 त्यसपछि टोबीस प्रतिक्रिया, र, उहाँले भन्नुभयो: "म त्यो सात पति गर्न दिइएको छ कि सुन्न, र तिनीहरूले बितिसकेका. तर म पनि यो सुनेको छु: एक राक्षस तिनीहरूलाई मारे भनेर.
6:15 त्यसैले, मलाई डर लाग्यो, यो नत्र पनि मलाई हुन सक्छ. र पछि म मेरो आमाबाबुको मात्र बच्चा हुँ, म गम्भीर गर्न शोक आफ्नो बुढ्यौली पठाउन सक्छ। "
6:16 त्यसपछि स्वर्गदूत राफेइल उहाँलाई भने: "मलाई सुन्नुहोस्, र म तपाईंलाई प्रकट गर्नेछ जो, को भूत विजयी सक्नुहुन्छ कसमाथि.
6:17 जस्तै, यस्ता प्रकारले विवाह प्राप्त गर्नेहरूलाई आफूलाई र आफ्ना मनमा परमेश्वरको निकाल्न, र यस्तो तरिका आफ्नो कामवासना गर्न आफूलाई खाली गर्न रूपमा, घोडा र खच्चर जस्तै, जो कुनै समझ छ, तिनीहरूलाई अधिक भूत शक्ति छ.
6:18 तर तिमी, तपाईं उनको स्वीकार हुनेछ जब, बेडरूम प्रविष्ट गर्नुहोस् र लागि तीन दिन देखि उसलाई महादेशमा आफैलाई राख्न, र उनको साथ प्रार्थना भन्दा अन्य केही गर्न आफूलाई खाली.
6:19 यसबाहेक, त्यो रात मा, धूप जस्तै माछा को कलेजो बाल्न, र राक्षस उडान गर्न राख्नु हुनेछ.
6:20 सत्य मा, दोस्रो रात, तपाईं पवित्र Patriarchs जस्तो शारीरिक संघ प्राप्त गर्न तयार हुनेछ.
6:21 अनि तेस्पछि, तेस्रो रात, तपाईं आशिष् प्राप्त गर्नेछन्, ताकि स्वस्थ बच्चाहरु तपाईं दुवै देखि procreated हुन सक्छ.
6:22 अनि त, तेस्रो रात पूरा होने, तपाईं प्रभुको डर संग कुमारी प्राप्त हुनेछ, शारीरिक इच्छा द्वारा भन्दा बच्चाहरु को प्रेम गरेर थप नेतृत्व, ताकि, अब्राहामको सन्तान रूपमा, तपाईं त छोराछोरीको आशिष् प्राप्त गर्नेछन्.
7:1 र त्यसैले तिनीहरू Raguel गए, र Raguel gladness तिनीहरूलाई प्राप्त.
7:2 र Raguel, मा टोबीस नरहन, अन्ना पत्नी भन्नुभयो, "यो जवान मेरो भान्जा जस्तै कति छ!"
7:3 र उहाँले यस बोली जब थियो, उहाँले भन्नुभयो, "हाम्रो भाइहरू को तपाईं कुन छन्, जवान मानिसहरू?"
7:4 तर तिनीहरूले भने, "हामी Naphtali कुलका छन्, निनवेको दासत्वबाट। "
7:5 र Raguel तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "तिमी मेरो भाइ Tobit थाह?"तिनीहरूले उहाँलाई भने, "हामी उहाँलाई थाह छ।"
7:6 र उहाँले उहाँको बारेमा धेरै राम्रो कुरा भन्दै थियो पछि, दूतलाई Raguel भन्नुभयो, "जसलाई बारेमा सोध्नु भएको Tobit यो जवान पिता हो।"
7:7 र Raguel उहाँलाई तिर आफूलाई फाले र आँसु र रूँदै आफ्नो घाँटी मा उहाँलाई चुम्बन, यसो, "आशिष् तिमीहरूमा सकिन्छ, मेरो छोरा, किनभने तपाईं राम्रो र सबै भन्दा महान मानिस छोरा छन्। "
7:8 र आफ्नो पत्नी अन्ना, र छोरी सारा, रोइरहेका थिए.
7:9 अनि त, तिनीहरूले बोली थियो पछि, Raguel हत्या गर्न एक भेडा निर्देशन, र भोज तयार गर्न. र खाने लागि झुकन उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो सल्लाह गर्दा,
7:10 टोबीस भने, "यहाँ, आज, म खान छैन वा पिउन, तपाईं पहिलो मेरो आवेदन पुष्टि नभएसम्म, र मलाई सारा आफ्नो छोरी दिन प्रतिज्ञा। "
7:11 जब Raguel यो शब्द सुने, उहाँले डराए, थाह पाउँदा ती सात पुरुष befallen कुरा, जो उनको नजिक थियो. र उहाँले डर गर्न थाले, नत्र यो नै तरिका पनि उहाँलाई हुन सक्छ. र, उहाँले wavered र आवेदन कुनै थप प्रतिक्रिया दिए पछि,
7:12 स्वर्गदूतसँग उहाँलाई भने: "यो एक उनको दिन नडराऊ, यो एक परमेश्वरको डर किनभने. उहाँले आफ्नो छोरी गर्न सामेल हुन बाध्य छ. किनभने यो, कुनै अन्य एक उनको सक्थे। "
7:13 त्यसपछि Raguel भने: "म परमेश्वरले आफ्नो दृष्टि अघि मेरो प्रार्थना र आँसु स्वीकारे छ कि शङ्का छैन.
7:14 र मलाई विश्वास छ, त्यसैले, तिमी मलाई आउन उहाँले कारण छ कि, आफ्नै kindred को एक विवाहमा त यो एक सामेल हुन सक्छ, मोशाको व्यवस्था अनुसार. र अब, म उनको दिन हुनेछ शङ्का गर्न जारी छैन। "
7:15 र आफ्नो छोरी को दाहिने लिइरहेको, उहाँले टोबीस को सही हातमा दिनुभयो, यसो, "सक्छ अब्राहामको परमेश्वर, र इसहाक परमेश्वर, र याकूबका परमेश्वरले तपाईंलाई साथ. र उहाँले विवाह सँगै तपाईँ सामेल र तपाईंलाई उहाँको आशिष् पूरा गर्न सक्छन्। "
7:16 र कागज लिएर, तिनीहरूले विवाह एक लिखित रेकर्ड गरे.
7:17 र यो पछि, तिनीहरूले feasted, आशिष् परमेश्वरको.
7:18 र Raguel उहाँलाई आफ्नो पत्नी अन्ना भनिन्छ, र उनको अर्को बेडरूम तयार गर्न निर्देशन.
7:19 र त्यो यो मा उनको छोरी सारा ल्याए, र त्यो रोइरहेका थिए.
7:20 र त्यो उनको भन्नुभयो, "आत्मा मा स्थिर हुनुहोस्, मेरो छोरी. स्वर्गको प्रभु तपाईं सहन छन् कि शोक ठाउँमा gladness दिन सक्छ। "
8:1 सत्य मा, तिनीहरूले dined थियो पछि, तिनीहरूले उसलाई जवान शुरू.
8:2 अनि त, टोबीस, दूतलाई वचन सम्झना, आफ्नो झोला बाट कलेजो भाग लिए, र उहाँले प्रत्यक्ष coals भन्दा यो राखिएको.
8:3 त्यसपछि स्वर्गदूत राफेइल को भूत समातिए, र माथिल्लो मिश्र को मरुभूमिमा बाँधे.
8:4 त्यसपछि टोबीस को कुमारी आग्रह गरे, र उहाँले तिनलाई यसो भन्नुभयो: "सारा, उठ र यो दिन हामीलाई प्रार्थना गरौं, र भोलि, र निम्न दिन. लागि, यी तीन रात समयमा, हामी परमेश्वरको सामेल भइरहेका छन्. अनि तेस्पछि, जब तेस्रो रात पारित गरेको छ, हामी आफूलाई सँगै सामेल गरिनेछ.
8:5 पक्कै पनि लागि, हामी सन्तहरू को बच्चाहरु छन्, र हामी सँगै heathens रूपमा यस्तो प्रकारले सामेल हुनुपर्छ, जो परमेश्वरको नजान्ने हो। "
8:6 अनि त, सँगै अप बढ्दो, ती दुबै खुरन्धार प्रार्थना, एउटै समयमा, कि स्वास्थ्य तिनीहरूलाई दिइएको हुन सक्छ.
8:7 र टोबीस भने: "प्रभु, हाम्रो पुर्खाहरूले परमेश्वर, आकाश र पृथ्वी तपाईं आशीर्वाद सक्छ, र समुद्र, र फोहराहरू, र नदी, र आफ्नो सबै प्राणीहरू भनी छन्.
8:8 तपाईं पृथ्वीको माटोको देखि एडम गठन, र तपाईं एक सहयोगीको रूपमा उहाँलाई हव्वालाई दिनुभयो.
8:9 र अब, हे प्रभु, तपाईं म वैवाहिक संघ मेरो बहिनी लिन भनेर थाहा, छैन सांसारिक खुशी को कारण द्वारा, तर posterity प्रेम लागि केवल, जो आफ्नो नाम सदासर्वदा धन्य हुन सक्छ। "
8:10 त्यसै गरी सारा भन्नुभयो, "हामीलाई दयालु हुनुहोस्, हे प्रभु, हामीलाई दयालु हुन. र हामीलाई दुवै स्वास्थ्य सँगै पुरानो बढ्न गरौं। "
8:11 र यो भयो, को कुखुराको भाले गरेको crowing समय बारे, Raguel आफ्ना सेवकहरूलाई आदेश भनेर बोलाए गर्न, र तिनीहरूले बाहिर उहाँसित गम्भीर खन्नुहोस् गर्न सँगै गए.
8:12 उहाँले भन्नुभयो लागि, "सायद नत्र, यस्तै मा, उसलाई के भयो होला, यो अन्य सात मानिसहरूलाई पनि जस्तै जो उनको नजिक। "
8:13 र तिनीहरूले पिट तयार गर्दा, Raguel पत्नी फर्के, र उहाँले तिनलाई यसो भन्नुभयो,
8:14 "आफ्नो नौकरानियां एक पठाउनुहोस्, र उहाँले मरेको छ भने उनको देख्न गरौं, म दिन को सुरुतिर अघि उहाँलाई मुर्दा गाड्नु सक्छ भनेर। "
8:15 अनि त, त्यो उनको दासीहरू एक पठाइएको, जो बेडरूम प्रविष्ट र तिनीहरूलाई सुरक्षित र क्षति नपुराउने पत्ता, दुवै सँगै सुतिरहेको.
8:16 र फर्केपछि, त्यो सुसमाचार रिपोर्ट. र तिनीहरूले प्रभु आशिष्: Raguel, विशेष गरी, र आफ्नो पत्नी अन्ना.
8:17 अनि तिनीहरूले भने: "हामी तपाईंलाई आशिष, इस्राएलका परमेश्वरले, किनभने यो हामी यसलाई लाग्यो कि बाटो मा भयो छैन शायद.
8:18 तपाईं हामीलाई तिर आफ्नो कृपा काम गरेको लागि, र तपाईं हामीलाई हामीलाई अपनाए गर्ने शत्रु बहिष्कृत छन्.
8:19 यसबाहेक, तपाईं दुई मात्र बच्चाहरु मा दया छन्. तिनीहरूलाई बनाउन, हे प्रभु, अझ तपाईं आशीर्वाद र तपाईं आफ्नो प्रशंसाको र आफ्नो स्वास्थ्य बलिदान प्रदान गर्न सक्षम, ताकि सबैले मानिसहरूका तपाईं एक्लै सबै पृथ्वीमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर थाहा हुन सक्छ। "
8:20 र तुरुन्तै Raguel पिट Refill गर्न आफ्ना सेवकहरूलाई निर्देशन, जो तिनीहरूले बनाएको, डेलाईट अघि.
8:21 त्यसपछि उहाँले भोज तयार गर्न आफ्नो पत्नी भन्नुभयो, र सबै एउटा यात्रा उतरदायित्व लिनु गर्नेहरूका लागि आवश्यक हो कि प्रावधान तयार.
8:22 त्यसै गरी, उहाँले दुई बोसो गाई र चार मेढे हत्या गर्न कारण, र एक भोज आफ्ना सबै छिमेकी लागि तयार गर्न र आफ्ना मित्रहरूको हरेक एक.
8:23 र Raguel दुई हप्ता उसलाई ढिलाइ गर्न टोबीस बिन्ती गरे.
8:24 यसबाहेक, Raguel नजिकै सबै कुराको, उहाँले टोबीस एक आधा भाग दिनुभयो, र त्यो एक लेखन गरे, बाँकी कि आधा पनि टोबीस को स्वामित्व मा पारित गर्नुपर्छ भनेर, आफ्नो मृत्यु पछि.
9:1 त्यसपछि टोबीस उहाँलाई दूतलाई भनिन्छ, उहाँले साँच्चै एक मानिस मानिन्छ जसलाई, र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो: "भाइ अजर्याहको, म मेरो शब्दहरू सुन्न बिन्ती:
9:2 म दिनुपर्छ भने आफैलाई तपाईंको सेवक हुन, म आफ्नो Providence को उत्तिकै योग्य हुन छैन.
9:3 तथापि, के तपाईं जन्तुहरूसित वा सेवकहरूसित लिन म माग्छु, र rages मा Gabael जान, को Medes शहर, र उसलाई आफ्नो हस्तलिखित टिप्पणी गर्न पुनर्स्थापना, र उसलाई पैसा प्राप्त, र मेरो विवाह उत्सव आउन उहाँलाई आवेदन.
9:4 तपाईंलाई थाहा दिन मेरो बुबा संख्या कि लागि. र यदि म एक दिन थप ढिलाइ, आफ्नो प्राण दुःख गरिनेछ.
9:5 र पक्कै पनि तपाईं Raguel मेरो शपथ कसरी प्राप्त गरेको छ हेर्न, सपथमा म हुँ spurn गर्न सक्षम छ। "
9:6 त्यसपछि राफेइल उधारो चार Raguel को सेवकहरूको, र दुई उँट, र उहाँले rages गर्न यात्रा, को Medes शहर. र मा Gabael फेला, उहाँले उसलाई आफ्नो हस्तलिखित टिप्पणी दिनुभयो, र उहाँले सबै पैसा उसलाई प्राप्त.
9:7 र उहाँले तिनलाई प्रकट, टोबीस Tobit छोरा विषयमा, गरेका थिए सबै. र तिनले विवाह उत्सव उसलाई साथ गरे.
9:8 र उहाँले Raguel घरमा प्रवेश गरेका थिए जब, उहाँले टोबीस तालिका मा reclining पत्ता. र माथि leaping, तिनीहरूले प्रत्येक अन्य चुम्बन. र Gabael रोए, र तिनले परमेश्वरको आशिष्.
9:9 अनि उहाँले भन्नुभयो: "इस्राएलका परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष होस्, लागि एक मानिसको छोरा भन्दा महान र बस छन्, परमेश्वरको भय राख्ने र प्रदर्शन almsgiving.
9:10 र आशिष् आफ्नो पत्नी भन्दा आफ्नो आमाबाबुले भन्दा बोली हुन सक्छ.
9:11 र तपाईं आफ्नो छोरा देख्न सक्छ, आफ्नो छोरा को र छोराहरू, पनि तेस्रो र चौथो पुस्ता गर्न. र आफ्नो सन्तान इस्राएलका परमेश्वरको आशिष् हुन सक्छ, जो सदासर्वदा शासनकालमै। "
9:12 र जब सबै भन्नुभयो थियो, "Amen,"तिनीहरूले भोज नजिक. तर तिनीहरूले पनि प्रभुको डर संग विवाह भोजमा मनाइन्छ.
10:1 सत्य मा, टोबीस किनभने विवाह उत्सव को ढिलाइ हुँदा, आफ्ना पिता Tobit चिन्तित थियो, यसो: "तिमी किन मेरो छोरा ढिला भयो लाग्छ, वा उहाँले किन त्यहाँ detained गरिएको छ?
10:2 तपाईं Gabael मृत्यु भएको छ कि लाग्छ, र कुनै एक उसलाई पैसा चुक्ता हुनेछ?"
10:3 र त त्यो अति दुःखी हुन थाले, उहाँले र उसलाई आफ्नो पत्नी अन्ना दुवै. र ती दुबै सँगै रुन्छ थाले, किनभने आफ्नो छोरा होइन कम्तिमा मा नियुक्त दिन तिनीहरूलाई फर्कन.
10:4 तर आफ्नो आमा inconsolable आँसु रोए, र पनि भन्नुभयो: "धिक्कार, मलाई धिक्कार, हे मेरो छोरा. हामी किन टाढा यात्रा गर्न पठाउन गर्नुभयो, तपाईं: हाम्रो आँखाको ज्योति, हाम्रो पुरानो उमेर को कर्मचारी, हाम्रो जीवनको सांत्वना, हाम्रो posterity आशा?
10:5 तपाईंलाई रूपमा सबै कुराहरू सँगै भइरहेको, हामी तपाईंले खारेज गर्न पर्छ छ। "
10:6 र Tobit उनको भन्दै थियो: "शान्त हुनुहोस्, र परेशान नगर्नुहोस्. हाम्रो छोरा सुरक्षित छ. त्यो मानिस, जसलाई हामी उहाँलाई पठाइयो, पर्याप्त विश्वासी छ। "
10:7 अझै त्यो द्वारा कुनै सक्षम अर्थ सान्त्वना गर्न थियो. तर, हरेक दिन अप leaping, त्यो सबै राउन्ड देख्यो, र वरिपरि सबै तरिका यात्रा, जो त्यहाँ उहाँले फर्कन सक्छ कि कुनै पनि आशा देखिन्थ्यो, त्यो संभवतः उसलाई टाढाबाट देखि आ हेर्नुहोस् सक्छ भनेर.
10:8 सत्य मा, Raguel आफ्नो छोरा-मा-व्यवस्था भने, "यहाँ रहनु, र म आफ्नो बुबा Tobit आफ्नो स्वास्थ्य सन्देश पठाउन हुनेछ। "
10:9 र टोबीस उहाँलाई भने, "म मेरो बुबा र मेरो आमा अब दिन गन्ती भनेर थाहा, र आफ्नो आत्माले तिनीहरूलाई भित्र यातना हुनुपर्छ। "
10:10 र जब Raguel बारम्बार टोबीस बिन्ती थियो, र उहाँले द्वारा कुनै उहाँलाई सुन्न इच्छुक मतलब थियो, उहाँले तिनलाई सारा वितरण, र आफ्ना सबै पदार्थ को आधा: पुरुष र महिला सेवकहरू संग, भेडा संग, उँट, र गाई, र धेरै पैसा. र उहाँले तिनलाई दूर खारेज, सुरक्षा र gladness मा, उहाँबाट,
10:11 यसो: "प्रभुको पवित्र स्वर्गदूत आफ्नो यात्रा संग हुन, र उहाँले क्षति नपुराउने मार्फत सक्छ, र तिमी ठीक आफ्नो आमाबाबुले विषयमा छ पत्ता लगाउन सक्छ, र मेरो आँखा आफ्नो छोरा देख्न सक्छ म मर्न अघि। "
10:12 र आमाबाबुले, आफ्नो छोरी को पकड लिइरहेको, उनको चुम्बन र उसलाई जान देउ:
10:13 उनको ससुरा सम्मान उनको हप्काउँदै, पतिको प्रेम, परिवार मार्गदर्शन गर्न, घरपरिवारको शासन गर्न, र irreproachably आफु व्यवहार गर्न.
11:1 र तिनीहरूले फिर्ता थिए, तिनीहरूले हारान गर्न मार्फत आए, जो यात्रा को बीचमा छ, विपरीत निनवेमा, मा एघारौँ दिन.
11:2 र दूतलाई भने: "भाइ टोबीस, के तपाईं आफ्नो पिता छोडेर कसरी थाहा.
11:3 अनि त, यो तपाईं प्रसन्न यदि, हामीलाई अगाडि मा जाने, र परिवार एक ढिलो चरण हामीलाई पछि गरौं, सँगै आफ्नो दुलही संग, र जनावर संग। "
11:4 र उसलाई खुसी देखि यो तरिका मा जाने, रफएल टोबीस भन्नुभयो, "माछा को पित्त बाट तपाईंसँग लिनुहोस्, यो आवश्यक हुनेछ लागि। "अनि यति, टोबीस यसको पित्त देखि लिएर, र उहाँले अगाडि गए.
11:5 तर अन्ना हरेक दिन बाटो छेउमा बसे, एक पहाडी को शीर्ष मा, त्यो एक लामो दूरी लागि हेर्न सक्षम हुनेछ जहाँ बाट.
11:6 र त्यो स्थान आफ्नो आगमन लागि हेर्दै बेला, त्यो टाढा बन्द देख्यो, र चाँडै त्यो उनको छोरा आउँदै थियो भनेर बुझे. र चलिरहेको, त्यो उनको पति यसलाई रिपोर्ट, यसो: "हेर, आफ्नो छोरा आएको। "
11:7 र राफेइल टोबीस भन्नुभयो: "तपाईँले आफ्नो घर प्रवेश रूपमा, तुरुन्तै प्रभु आफ्नो परमेश्वरको पुजा गर्नु. र, उहाँलाई धन्यवाद दिने, आफ्नो बुबा दृष्टिकोण, र उसलाई चुम्बन.
11:8 र तुरुन्तै आफ्नो आँखा माछा को यो पित्त देखि अभिषेक, जो तपाईं संग बोक्न. लागि आफ्नो आँखा चाँडै खोल्न भनेर थाह गर्नुपर्छ, र आफ्नो बुबा स्वर्गमा ज्योति देख्ने, र उहाँले तपाईं को दृष्टि रमाहट हुनेछ। "
11:9 त्यसपछि कुकुर, जो तरिकामा तिनीहरूलाई भएको थियो, अगाडि भाग्यो, र, एक दूत जस्तै आइपुगेपछि, उहाँले fawning र आफ्नो पुच्छर wagging आफ्नो आनन्द देखाए.
11:10 र माथि बढ्दो, आफ्नो अन्धो बुबा चलाउन थाले, आफ्नो खुट्टा संग ठेस. र सेवक आफ्नो हात दिएर, उहाँले आफ्नो छोरा भेट्न मा भाग्यो.
11:11 र उसलाई प्राप्त, उहाँले उसलाई चुम्बन, रूपमा आफ्नो पत्नी गरे, र ती दुबै आनन्द लागि रुन्छ थाले.
11:12 र तिनीहरूले परमेश्वरको लाग्यो थियो र धन्यवाद दिनुभएको थियो जब, तिनीहरूले सँगै बसे.
11:13 त्यसपछि टोबीस, माछा को पित्त देखि लिएर, आफ्नो बुबाको आँखा अभिषिक्त.
11:14 र करिब आधा एक घण्टा पारित, त्यसपछि सेतो फिलिम आफ्नो आँखा बाहिर आउन थाले, एक अन्डा को झिल्ली जस्तै.
11:15 त्यसैले, यो पकड लिइरहेको, टोबीस आफ्नो आँखा बाट यो दूर झिकेर, र तुरुन्तै तिनले आफ्नो दृष्टि प्राप्त.
11:16 र तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा: Tobit विशेष गरी, र पत्नी, र सबै ती जो उसलाई थाह थियो.
11:17 र Tobit भने, "म तपाईंलाई आशिष, इस्राएलका हे प्रभु परमेश्वर, किनभने तपाईंले मलाई chastised छ, र तपाईंले मलाई सुरक्षित छन्, र हेर, म मेरो छोरा टोबीस हेर्नुहोस्। "
11:18 अनि तेस्पछि, सात दिन पछि, सारा, आफ्नो छोरा को पत्नी, र सबै परिवार सुरक्षित आइपुगे, भेडा संग, र उँट, र आफ्नो पत्नी देखि धेरै पैसा, तर पनि पैसा जो संग त्यो Gabael पाएको.
11:19 र उहाँले आफ्नो आमाबाबुले बताए सबै परमेश्वरको लाभ, जो उहाँले उहाँको वरिपरि सबै उत्पादन थियो, मानिस को माध्यम द्वारा उसलाई जो नेतृत्व थियो.
11:20 र त्यसपछि Ahikar र Nadab आइपुगे, टोबीस को मातृ पहिलो cousins, टोबीस लागि आनन्द, र सबै असल कुराहरू लागि उसलाई congratulating परमेश्वरले उहाँलाई वरिपरि सबै प्रकट गर्नुभएको थियो भनेर.
11:21 र सात दिन लागि तिनीहरूले feasted, र सबै ठूलो आनन्द संग आनन्द थिए.
12:1 त्यसपछि Tobit उहाँलाई आफ्नो छोरा भनिन्छ, र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, "यो पवित्र मानिसलाई हामी सक्षम दिन के हुन्, जसले तपाईंलाई सँगसँगै?"
12:2 टोबीस, उत्तर, आफ्नो बुबालाई भने: "बुबा, हामीले उहाँलाई के ज्याला दिन पर्छ? र के आफ्नो लाभ को योग्य हुन सक्छ?
12:3 उहाँले मलाई नेतृत्व र उहाँले सुरक्षित फिर्ता मलाई ल्याए. उहाँले Gabael देखि पैसा प्राप्त. उहाँले मलाई मेरो पत्नी छ कारण. र उहाँले तिनलाई देखि दूर राक्षस सीमित. उहाँले उनको आमाबाबुले गर्न आनन्द कारण. आफैलाई, उहाँले माछा द्वारा devoured हुनबाट उद्धार. तपाईं लागि जाँदा, उहाँले पनि स्वर्गको ज्योति हेर्न तपाईं कारण. अनि त, हामी उहाँमार्फत सबै राम्रो कुरा भरिएको छ. के हामी संभवतः तिनलाई दिन सक्छ यी कुराहरू योग्य हुन भनेर?
12:4 तर म बिन्ती, मेरा बुबा, सायद आफूलाई ल्याए गरिएको छ कि सबै कुरा को आधा लागि लिन deign भने उहाँलाई सोध्न। "
12:5 र उसलाई कल, पिता विशेष गरी, र छोरा, तिनीहरूले उहाँलाई अलग लिए. र तिनीहरूले उहाँलाई आवेदन गर्न थाले, उहाँले तिनीहरू ल्याए थिए सबै कुराको एक आधा भाग स्वामित्व स्वीकार गर्न deign थियो भनेर.
12:6 त्यसपछि उहाँले निजी तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "स्वर्गको परमेश्वरको आशिष् दिनुहुन्छ, र जो बाँच्न सबै को दृष्टि मा उहाँलाई स्वीकार, लागि उहाँले तपाईं तिर आफ्नो कृपा काम छ.
12:7 यो एक राजा को गोप्य ढाकछोप गर्न राम्रो छ लागि, प्रकट र परमेश्वरको काम स्वीकार गर्न पनि आदरणीय छ जस्तै.
12:8 उपवास संग प्रार्थना राम्रो छ, र almsgiving भण्डारणमा सुन टाढा लुकाउने भन्दा राम्रो छ.
12:9 almsgiving लागि मृत्युबाट उद्धार, र एउटै पाप के purges र एक कृपा र अनन्त जीवन पाउन सक्षम बनाउँछ छ.
12:10 तर पाप र iniquity गर्नेहरूलाई आफ्नै प्राण गर्न शत्रुहरू छन्.
12:11 त्यसैले, म तिमीलाई सत्य प्रकट, र म तपाईंलाई बाट व्याख्या लुकाउन हुनेछ.
12:12 तपाईं आँसु प्रार्थना गर्दा, र मृत गाडे, र आफ्नो खाने छोडेर, र आफ्नो घर मा दिन मरेका लुकेको, र रात तिनीहरूलाई गाडे: म प्रभु तपाईंको प्रार्थना प्रस्ताव.
12:13 र तपाईं परमेश्वरको लागि स्वीकार्य किनभने, लागि परीक्षा परीक्षण गर्न यसलाई आवश्यक थियो.
12:14 र अब, प्रभु मलाई तपाईं निको पार्न पठाइएको छ, र सारा मुक्त गर्न, आफ्नो छोराको पत्नी, को भूत देखि.
12:15 म दूतलाई राफेइल छु, सात मध्ये एक, जसले प्रभु खडा। "
12:16 र तिनीहरूले यी कुराहरू सुनेका गर्दा, तिनीहरूले परेशान थिए, र डर जफत भइरहेको, तिनीहरूले अनुहार मा जमीन मा गिर.
12:17 र दूतलाई तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "शान्ति तपाईं हुन. डर छैन.
12:18 मैले तपाईंलाई हुँदा लागि, म परमेश्वरको इच्छा द्वारा थियो. उसलाई आशीर्वाद, र उहाँलाई गाउन.
12:19 वास्तवमा, म खान र तपाईंसँग पिउन देखिन्थ्यो, तर म अदृश्य खाना र पेय को प्रयोग, जो मानिसहरू द्वारा देख्न सकिन्छ.
12:20 त्यसैले, यसलाई म मेरो पठाइएको जो फर्कन समय छ. तर तपाईं को लागि रूपमा, परमेश्वरको आशीर्वाद, र आफ्ना सबै विचित्रताहरू वर्णन। "
12:21 अनि उहाँले यी कुराहरू भन्नुभएको थियो जब, उहाँले आफ्नो दृष्टि देखि लगियो, र तिनीहरूले अब कुनै पनि उहाँलाई हेर्न सकेनौं.
12:22 त्यसपछि, आफ्नो अनुहार तीन घण्टा लमतन्न परेर पसारिएका झूट, तिनीहरूले परमेश्वरको आशिष्. र माथि बढ्दो, तिनीहरूले आफ्नो सबै विचित्रताहरू वर्णन.
13:1 अनि त, एल्डरले Tobit, आफ्नो मुख खोल्ने, प्रभु आशिष्, र, उहाँले भन्नुभयो: "हे प्रभु, तपाईं सदाको ठूलो हो र तपाईंको राज्य सबै उमेरका छ.
13:2 तपाईं महामारी लागि, र तपाईं सुरक्षित. तपाईं गम्भीर तल नेतृत्व, र तपाईं फेरि ल्याउन. र त्यहाँ आफ्नो हात बाट उम्कन सक्ने कुनै एक छ.
13:3 प्रभु गर्न स्वीकार, इस्राएलका छोराहरू, र राष्ट्रका दृष्टि मा उहाँको प्रशंसा.
13:4 लागि, साँच्चै, उहाँले अन्यजातिहरूको बीचमा तपाईं dispersed छ, जो उहाँलाई नजान्ने हो, तपाईं आफ्नो विचित्रताहरू घोषणा गर्न सक्छ भन्ने, र तिनीहरूलाई कुनै अन्य सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर थाह तपाईं सक्छ कि, उहाँलाई बाहेक.
13:5 उहाँले किनभने हाम्रो iniquities हामीलाई chastised छ, र उहाँले हामीलाई किनभने उहाँको दया को बचत हुनेछ.
13:6 त्यसैले, उहाँले हाम्रो लागि गर्नुभएको छ के हेर्न, र, डर र कामेको संग, उहाँलाई स्वीकार. र आफ्नो काम संग सबै उमेरका राजा महिमा.
13:7 तर मेरो लागि रूपमा, म मेरो कैद देशमा उहाँलाई स्वीकार गर्नेछ. उहाँले एक पापी राष्ट्र भित्र आफ्नो बडाई प्रकट गरेको छ लागि.
13:8 अनि त, रूपान्तरित, तपाईं पापी, र परमेश्वरको उपस्थिति न्याय गर्न, उहाँले तपाईं तिर आफ्नो कृपा मा कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वास.
13:9 तर म र मेरो प्राण उहाँलाई आनन्दित.
13:10 प्रभु आशीर्वाद, सबै तपाईं आफ्नो चुन्नु. आनन्द को दिन राख्न, र तिनलाई स्वीकार.
13:11 हे यरूशलेम, परमेश्वरको शहर, प्रभु तपाईं आफ्नो हात को काम को लागि chastised छ.
13:12 आफ्नो राम्रो कुराको प्रभु गर्न स्वीकार, र सबै उमेरका परमेश्वर आशीर्वाद, उहाँले तपाईंलाई आफ्नो बासस्थान पुनर्निर्माण हुन सक्छ भनेर, र उहाँ तिमीहरूका सबै कैदीहरूलाई सम्झन सक्छ, र तपाईं सबै उमेरका र सधैंभरि खुसी हुन सक्छ.
13:13 तपाईं एक भव्य प्रकाश संग चमक हुनेछ, र पृथ्वीका सबै समाप्त तपाईं द्वारा पुजा गर्नु हुनेछ.
13:14 टाढा बाट राष्ट्र तपाईं हुनेछ, उपहार ल्याउन. र तपाईं, तिनीहरूले प्रभु पुजा गर्नु पर्छ, र तिनीहरूले पवित्रीकरण आफ्नो भूमि पकड हुनेछ.
13:15 तिनीहरूले तपाईंलाई महान् नाम आह्वान गर्नेछ.
13:16 जसले तपाईंलाई नाइँनास्ति ती श्राप गरिनेछ, र तपाईंले निन्दा गर्नेहरूलाई दोषी हुनेछ, र जसले तपाईंलाई निर्माण ती अनमोल हुनेछ.
13:17 तर तपाईंले आफ्नो छोरा आनन्दित, किनभने तिनीहरू सबै आशिष् गरिनेछ, र तिनीहरूले प्रभु लागि भेला गरिनेछ.
13:18 जसले तपाईंलाई प्रेम र कसले शान्ति आनन्दित सबैलाई छन् धन्य.
13:19 प्रभु आशीर्वाद, हे मेरो प्राण, प्रभु हाम्रो परमेश्वर यरूशलेम स्वतन्त्र छ, आफ्नो शहर, उनको सङ्कष्ट हरेक एक देखि.
13:20 खुसी म हुनेछ, यदि मेरो सन्तान कुनै पनि यरूशलेमको चमक हेर्न बाँकी गरिनेछ.
13:21 यरूशलेमको ढोकाहरू नीलम र Emerald देखि निर्माण गरिनेछ, र यसका सबै पर्खालहरु बहुमूल्य ढुङ्गा घेरिएको गरिनेछ.
13:22 यसको सबै सडकमा ढुङ्गा छापिएको गरिनेछ, सेतो र सफा. र 'Alleluia' यसको छिमेक भर गाया हुनेछ.
13:23 धन्य प्रभु हुन, जो यो उच्च छ, र त्यो भन्दा बढी शासन सक्छ, सदासर्वदा. Amen। "
14:1 र Tobit को प्रवचन पूरा भएको थियो. र Tobit पछि आफ्नो दृष्टि प्राप्त, उहाँले चालीस दुई वर्ष बस्ने, र उहाँले आफ्नो नातिनातिनी छोराहरू देखे.
14:2 अनि त, होने एक सय र दुई वर्ष पूरा, उहाँले निनवेमा मा honorably गाडे.
14:3 लागि उहाँले पचास-छ वर्षको, उहाँले आफ्नो आँखाको ज्योति गुमाएका गर्दा, र उहाँले साठी वर्षको, उहाँले यसलाई फेरि साँच्चै पाउँदा.
14:4 र, सत्य मा, आफ्नो जीवनको बाँकी gladness थियो. अनि त, परमेश्वरको डर असल उपलब्धि संग, उहाँले शान्ति मा प्रस्थान.
14:5 तर, आफ्नो मृत्युको घण्टामा, उहाँले बोलाउनुभएको आफ्नो छोरा टोबीस, तिनका छोराहरूलाई साथ, सात युवाहरूले आफ्ना grandsons थिए, र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो:
14:6 "निनवेमा चाँडै पारित हुनेछ. प्रभुको शब्द को लागि अगाडी जान्छ, र हाम्रा भाइहरूले, जो इस्राएलका भूमि टाढा dispersed गरिएको छ, यो फर्कन पर्छ.
14:7 यसरी आफ्नो वीरान भूमि फेरि सम्पूर्ण भरिएको हुनेछ. र परमेश्वरको घर, जो यो भित्र धूप आगोजस्तै थियो, फेरि पुनर्निर्माण हुनेछ. र परमेश्वरको डर गर्नेहरूलाई त्यहाँ फर्केर.
14:8 र अन्यजातिहरूको मूर्तिहरू त्यागिन् हुनेछ, र तिनीहरूले यरूशलेममा प्रवेश गर्नेछ, र तिनीहरूले बास हुनेछ.
14:9 र पृथ्वीका सबै राजाहरू यो आनन्दित, इस्राएलका राजा adoring.
14:10 त्यसैले, मेरो छोरा, आफ्नो बुबा सुन्न. सत्य प्रभुको सेवा, र खोजी उहाँलाई प्रसन्न कुराहरू गर्न.
14:11 र आफ्नो छोरा आदेश, तिनीहरूले न्याय र almsgiving पूरा हुन सक्छ भनेर, र भनेर तिनीहरूले परमेश्वरको mindful हुन सक्छ र सबै समय मा उहाँलाई आशीर्वाद सक्छ, सत्य र आफ्नो सबै शक्ति.
14:12 र अब, छोराहरू, मलाई सुन्न, र यहाँ रहने छैन. तर, जो दिन मा तपाईं एक चिहान मा मेरो नजिकै आफ्नो आमा मुर्दा गाड्नु हुनेछ, त्यो समय देखि, यो स्थान छोड्न आफ्नो कदम निर्देशन.
14:13 म यसको iniquity यसको अन्त ल्याउन हुनेछ भनेर। "
14:14 र यो पनि त्यस्तै भयो, आफ्नो आमा को मृत्यु पछि, टोबीस निनवेमा देखि हटाउनुभएपछि, पत्नी संग, र छोराहरू, र छोराहरू छोराहरू, र उहाँले आफ्नो ससुरा फर्के थियो.
14:15 र उहाँले तिनीहरूलाई राम्रो बुढेसकालमा क्षति नपुराउने फेला. र उहाँले तिनीहरूको हेरविचार, र उहाँले आफ्नो आँखा बन्द. र Raguel घरमा सबै सम्पत्तिको उहाँलाई पारित. र उहाँले पाँचौ पुस्ता आफ्नो छोरा छोराहरू देखे.
14:16 र, प्रभुको डर मा पूरा भएको नब्बे-नौ वर्ष, आनन्द संग, तिनीहरूले उहाँलाई गाडे.
14:17 तर आफ्नो सबै परिवार र आफ्ना सबै वंश राम्रो जीवन र पवित्र कुराकानीमा जारी, ताकि तिनीहरू दुवै परमेश्वर र मानिसहरूको लागि स्वीकार्य थिए, साथै सबैलाई रूपमा गर्ने देशमा बास.